Fotoana hananganana ny RSS RSS anao amin'ny maty | Martech Zone
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, Feeds dia mbola mivezivezy amin'ny endrika amin'ny Internet… na farafaharatsiny ambanin'ny tany. Ny syndication votoatiny dia mety lanin'ny rindranasa sy tranokala mihoatra ny olona mampiasa mpamaky fahana… fa ny fotoana ahafahana miantoka ny fizarana ny atiny ary toa tsara amin'ny fitaovana dia mbola paikadin'ny paikadin'ny atiny.
Fanamarihana: Raha very ianao - ity misy lahatsoratra iray momba inona no fahana RSS.
Taitra aho rehefa nijery ny kaonty Feedburner taloha raha nahita fa mbola misy mpampiasa 9,000 50,000+ mijery ny atiny amin'ny alàlan'ny sakafonay isan'andro… wow! Ary rehefa nanomboka nijery tranonkala hafa aho, dia nanana mpamaky XNUMX XNUMX+ tamin'ny sasany tamin'ireo bilaogy izy ireo. Ireto misy zavatra vitsivitsy nataontsika mba hananganana ny RSS feed aminay amin'ny alàlan'ny WordPress.
Ataovy azo antoka tsara nalefa ny sary kely eo amin'ny tranokalanao ary ampio ny tagging ilaina mba hanana sary asongadin'ny lahatsoratrao. Azo atao izany amin'ny WordPress amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Plugin SB RSS Feed Plus ho an'ny WordPress na afaka manoratra ny asanao manokana ianao.
Tanteraho Feedpress hahafahanao manara-maso sy mandrefy ny fanjifanao sy ny tahan'ny click-through, ahafahanao manamboatra ny URL feed anao ary manosika ny fantsonao mankany amin'ireo fantsom-piarahamoninao.
Manampia blurb copyright na call to action eo am-pototry ny sakafonao miaraka a Plugin WordPress SEO. Tratranay ny olona mangalatra sy mamoaka indray ny sakafonay foana ary moana izy ireo mitazona ny zon'ny mpamorona anay rehefa mamoaka izany.
Ampio ny adiresy fahana ao amin'ny menioo ary apetraho eo amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny marika iraisam-pirenena ho an'ny RSS feeds.
Ampio ny tag lohateny ilaina amin'ny lohahevitrao eo anelanelan'ny mari-doha mba hahitan'ny fampiharana sy ny mpitety ny adiresy fahana anao, ity ny kaody ho an'ny adiresy fahana:
Vonoy ny feedburner ary velomy ny FeedPress:
Nandatsaka ny Feedburner izahay ary nampihatra Feedpress amin'ny tranokalanay. Izy io dia sehatra an-tserasera momba ny famahanana feno fisongadinana miaraka amina endri-javatra fanampiny fanampiny toa ny fahaizana CNAME ny sakafonao ka tsy miankina amin'izany taloha ianao FeedBurner URL. Ka manana ny subdomain-ko https://feed.martech.zone napetraka ho an'ny sakafonay!
Ity ny fomba fanovana ny tranokalanao ho Feedpress:
Ny FeedPress dia manana safidy iray taonina hafa hanamboarana sy hanatsarana ny fahana:
Famoahana haino aman-jery sosialy - FeedPress koa dia manana mampino fampidirana media sosialy izay ahafahanao mamoaka ho azy ny atiny vaovao vao nivoaka manerana ny kaonty media sosialinao.
Fanarahana Track - tatitra mandroso sy marina momba ny isan'ny mpanjifa anananao, aiza, ary manao ahoana ny fihinanana ireo sakaizanao.
Newsletter mailaka - Maimaim-poana ho an'ny mpanjifa 1000 na vitsy. Alefaso ny asan'ny taratasin'izy ireo ary alaivo ny kaody fisoratana anarana hampidiriny ao amin'ny tranokalanao manokana.
Mandrosoa fampandrenesana - Fampandrenesana tosika mavitrika amin'ny alàlan'ny PubSubHubbub hampandre ny mpamaky fahana ny atiny vaovao.
Custom Customization - Manampia lohateny sy sary famantarana, mametaka ny atiny, manova ny vakiteny bebe kokoa, manitsy ny isan'ny lahatsoratra.
Fanamarinana azo antoka - Fanamafisana ny SSL mba hampitomboana ny fandefasana.
Fampidirana Google Analytics - Fanaraha-maso UTM mandeha ho azy rehefa tsindrio ny mpamaky fahana amin'ny tranokalanao.
Fomba hafa - Ny sakafonao dia azo lanina amin'ny XML, JSON, na HTML.
WordPress Plugin - Raha ao amin'ny WordPress ianao dia manolotra plugin izy ireo mba hahamora kokoa ny raharaha!
Midira ho an'ny FeedPress
Fanamarihana: nasiako URL afiliana ho an'ny Feedpress - ary atolory ny sehatra pro!
Tags: Alternatefampiharana rss xmlmiovaova avy amin'ny feedburner ho feedpressfahanakisary fahanaFeedBurnerfeedlyfanontam-pirintytag header for feedny fomba fampidirana copyright iray amin'ny fahana anaony fomba famoahana amin'ny sosialyjson feedrss feedkisary rssrss amin'ny sosialyrss xmlsb rss feed plus pluginWordPressplugin WordPress